यौन सम्पर्क नगरी ‘कुमारी युवती’ यसरी हुन्छन् गर्भवती - KlipMandu
यौन सम्पर्क नगरी ‘कुमारी युवती’ यसरी हुन्छन् गर्भवती
विवाह नगरी नै आमा बन्ने कुरा सुन्दा नै अचम्म लाग्छ। तर आजकल कयौं महिला विवाह नगरीपनि आमा बन्ने गरेका छन्। त्यसकालागि महिलाहरुले आईवीएफको सहारा लिइरहेका छन्। त्यसको पछाडि युवतीहरु निजी र धार्मिक कारण भएको बताइरहेका छन्। यो पूरा प्रक्रियालाई ‘भर्जिन बर्थ’ भनिन्छ।
के हो आइवीएफ?
यदि कोही महिला पुरुषसँग विना शारीरिक सम्बन्ध आमा बन्न चाहने युवतीले आइवीएफको प्रयोग गर्न सक्छन्। आइवीएफमार्फत महिलाको डिम्बाशयबाट डिम्बा निस्किएपछि सबै डिम्बामा स्पर्म हालेर अम्ब्र्यो बनाइन्छ। त्यसपछि अम्ब्र्योलाई तीनदेखि पाँच दिनसम्म प्लास्टिकको नदीमा राखिन्छ। त्यसपछि महिलाको कोखमा राखिन्छ। आजकल महिलाहरुमा भर्जिन बर्थको चलन तीव्रगतिमा भइरहेको छ।
किन यस्तो गर्छन महिला ?
आइवीफ प्रयोग गर्ने केही महिलाका अनुसार अहिलेसम्म जीवन साथी नमिलेका कारण विवाह नगरी पनि बच्चा जन्माउन आइवीफको सहारा लिनु परेको हो। अर्कोतर्फ यौन सम्पर्कमा रुची नभएपनि बच्चा पाउने रहरले गर्दा आइवीएफको सहारा लिएको बताएका छन्।
पुरुष विना कसरी हुन्छ बच्चाको लालन पालन
डाक्टरहरुका अनुसार अहिलेसम्म भर्जिन आमा बनेका महिला आर्थिक रुपमा सम्पन्न छन्। बेलायतमा युवतीले २० वर्षको उमेरमा भर्जिन आमा बन्ने बाटो रोजेका थिए। डाक्टरहरुका अनुसार उनीहरु मानसिक रुपले तयार भएपछि आइवीएफको प्रयोग गरेका थिए। २०१३ मा गरिएको एक सर्वेक्षणका अनुसार अमेरिकामा २०० मध्ये १ जना महिला सेक्सुअल इन्टरकोर्सद्वारा गर्भवती भएकी थिइन्।
सेक्सुअल इन्टरकोर्श गर्ने महिलामध्ये ३१ प्रतिशत धार्मिक र आफ्नो निजी कारणले गर्दा भर्जिन आमा बन्ने बाटो रोजेको बताएका थिए।
केही धार्मिक मानिस यो प्रक्रियालाई गलत भएको बताउँछन्। उनहरुले बच्चाको जन्म प्राकृृतिक तरिकाले हुनुपर्ने बताएका छन्।
← विवाहितसँग सम्बन्ध नराख्नुस् भुलेर पनि पुरा पढ्नुहोस
भोट माग्ने गगन स्टायलः नमस्कार गर्ने, फिस्स हाँस्ने ! →
आण्टी-आण्टी भन्दै ढोका ढक्ढकायो, मैले ‘को हो ?’ भनेर सोध्दा ‘म प्रसादे हुँ ढोका खोल’ भन्यो